Brief Nhanganyaya kuti Company
Changzhou Longxin Machinery Co., Ltd yakatangwa muna 2001 pamwe mamiriyoni 30 Fund vakanyorwa. Dzimbahwe riri kurutivi kukura mapazi ose Hengshanqiao Town kumabvazuva weChicago Changzhou guta, zviri pedyo kukupesanisa Beijing-Shanghai mukuru-nokukurumidza njanji, Shanghai-Nanjing mukuru-nokukurumidza njanji uye Shanghai-Chengdu expressway. Longxin chinhu kushandiswa mugadziri Chemical michina midziyo pamwe zvachose munzvimbo vanenge 13.600 mativi mamita.
Longxin integrates zvekushandisa tsvakurudzo, budiriro uye gadzira, pamwe nemakore anopfuura 20 'chiitiko nenyanzvi kugadzirwa. fekitari yedu kazhinji pave "Longxin" & "Huabao" muchiso michina Chinyorwa matatu rwakapetwa paguyo, hydraulic matatu rwakapetwa paguyo, kombiyuta CNC matatu rwakapetwa paguyo, bead paguyo, Nano zvedongo jecha paguyo, yemapuraneti chisanganiso etc. Isuwo kusika, nokusangana, gadza uye chinja rose rakazara kufanana chigadzirwa mutsetse maererano chikumbiro mutengi nevanhu yedu michina. Michina yedu zvinowanzoshandiswa ingi, unhani, zvemagetsi namatidza, tupukanana, simba bhatiri, Nano zvinhu, kemikari nezuva, matehwe mapurasitiki, penzura, zvokudya, dhayi, silicone rabha, uye guar chingamu etc.
boka redu inovaka nyika yemhando mabikirwo kukuya uye yokupararira michina newe ane nyanzvi R & D chikwata uye nguva dzose mutungamiriri utsanzi uye yechimurenga indasitiri ino. Tinowana zvinopfuura 20 zvinoshandiswa bvumidzwa zvitupa, kusanganisira 5 zvinhu kukoka patents. Tinogona kupa nyanzvi gungano mutsetse maererano vatengi 'zvinodiwa okuwana. zvigadzirwa dzedu dziri aivigirwa kuna United States, Brazil, India, Russia, Japan, Korea, Singapore, Southeast Asia nedzimwe nyika uye kumatunhu, uye nakidzwa chakakwirira mukurumbira kubva mumamiriro ose oupenyu.
Changzhou Longxin Machinery Co., Ltd muridzi siyana honorary chinzvimbo, kusanganisira yepamusorosoro zvebhizimisi, National inokosha Ultra-naka upfu michina kutsvakurudzwa pakati, Micro-Nano rokugadzirira zvinhu engineered uye dzakapfuma nekuongororwa site uye mutevedzeri sachigaro chairema Chinese ingi Association. Longxin michina vari certifications pamusoro TüV, BV, CE uye ISO09001: 2018.
Our kupindirana musimboti ndiye "Quality Chokutanga, Excellent Service, Customers Chinogutsa". Shamwari pachokwadi welcome vari pamba uye kunze kwenyika pamwe nesu uye kuumba remangwana rakajeka kwemakemikari indasitiri pamwechete!
Kunobudirira pakuunganidza emakambani ehurumende.
Kuwedzera guru uye Longxin Machinery Co., Ltd rakavambwa.
Longxin Hydraulic Three Roller Mill yakazokudziridzwa.
Longxin CNC Three Roller Mill uye Bead Mill yakagadzirwa.
Longxin High Viscosity Bead Mill yakazokudziridzwa.
Longxin akasarudzwa sezvo mutevedzeri sachigaro chairema Chinese Ink Association.
Longxin Bead Mill vakawana wandei patents National.
negore goho ukoshi anopfuura mamiriyoni 60 uye Silicone muchini bazi yakatangwa.
Longxin akapiwa simba kuti National Special Ultra-naka upfu michina kutsvakurudzwa pakati.
Longxin akapiwa simba kuti High-Tech vachida.
Longxin achifambirana mberi, richisvika yakakura kubudirira mune ramangwana.
Kuwirirana musimboti: Quality First, Excellent Service, Customer Chinogutsa
Customer upmost, Excellent Service
mushandi wese Longxin kubata mutengi pamwe zvakakomba uye mutoro mafungiro, kuomerera pabasa pfungwa "kutora mutengi sezvo nepakati uye akatora kudiwa sezvo mutungamiri", kubvira mutengi wacho kudiwa, runopfuura tariro mutengi wacho, uye pakupedzisira mutengi zvinogutsa . Regai mutengi ose kunzwa kwedu wose kubva pre-sale kuti pashure-sale.
Professional Team, Kufunga vachikuya Technology
Longxin ine nhoroondo kwemakore anopfuura 20. In ichi kwemakore 20, tave kutaura chimwe chinhu kuti kubudisa kirasi yokutanga nokugeda michina. Vachitungamirirwa pamusoro kugadzirwa uye R & D mainjiniya, hatina vakaumba nyanzvi kugadzirwa uye kukura chikwata, kuisa hwaro hwakasimba nezvokukura nokugeda basa redu.
Zvisingaperi Innovation, Rambai Climbing
Longxin muridzi siyana honorary chinzvimbo, kusanganisira yepamusorosoro zvebhizimisi, National inokosha Ultra-naka upfu michina kutsvakurudzwa pakati, kugadzirira Micro-Nano zvinhu engineered uye dzakapfuma yokuedzwa nzvimbo. Kuburikidza edu kuramba kuvandudzika uye utsanzi, Longxin yave kuzivikanwa makasitoma edu uye akawana mukuru mukurumbira. Ticharamba kuvaka muchiso yedu wokura utsanzi yedu.